မြဇင်ယော် ● ငါ့ဝမ်းမနာ သားသက်လျာ | MoeMaKa Burmese News & Media
“သာဓု… သာဓု…. သာဓု ။ အခုလို ကန်တော့ရတဲ့ အကျိုးအားကြောင့် မိမိအတွက်၊ မိဘဆရာသမား ကျေးဇူးရှင်တွေအတွက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ သားကောင်းရတနာလေး ဖြစ်ပါစေဗျား”
“အကိုကြီးရာ ကျုပ်အသက်ကြီးမှ အိမ်ထောင်ကျတာ ဒီသားလေးတစ်ယောက်ပဲ ထွန်းကားပါတယ်”
“ငါသိပါတယ်ကွာ။ ဒီအရွယ်တောင်ရောက်နေပြီဘဲ၊ ဘယ်နှတန်းတက်ရမှာတုံးကွ”
“ရှစ်တန်းတက်ရမှာပါ၊ အဲဒါ အကိုကြီးနဲ့ ထားချင်လို့”
“ဟ မောင်ထွန်းဖေရ၊ ငါက တကိုယ်တည်းသမားကွ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ချက်ပြုတ်စားသောက်တာမဟုတ်ဘူး။ ကလေး ဘယ်အဆင်ပြေမလဲကွ”
“အကိုကြီးကို အားကိုးလို့လာတာပါ။ ရွာမှာက လ (ခွဲ) ပွင့်နေပြီဆိုတော့ မြို့ကို မပြောင်းစေချင်ကြဘူးဗျ။ ကျုပ်အကြောင်းနဲ့ ကျုပ်ဆိုတော့ ဇွတ်ပြောင်းလာတာဗျ”
“ကျုပ်သားလေးကို တရွာလုံးက လူရှုပ် လူပွေလေးလို့ သတ်မှတ်ထားကြတာဗျ၊ နာမည်အရင်းတောင် မခေါ်ကြဘူး။ သပွတ် အူလိုကောင်ဆိုပြီး သပွတ်လို့ ခေါ်ကြတာဗျ၊ သားကလေးတယောက်တည်းဆိုတော့ ကျုပ်လည်း မပြောက်ရက်ဘူးဗျာ။ အကိုကြီးကို အားကိုးပါတယ်ဗျာ။ ကျုပ်တုန်းကလည်း အကိုကြီးစောင့်ရှောက်ခဲ့တာဘဲ။ ကျုပ်သားလေးကိုလည်း စောင့်ရှာက် ပေးပါဗျာ”
“အေးပါကွာ၊ ငါစောင့်ရှောက်ပေးပါ့မယ်၊ စိတ်ချလက်ချ ထားသွားပါ”
“အမယ်လေး ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ” ဆိုပြီး မြေပဲတစ်တင်းနဲ့ ထိုင်ကန်တော့သွားတာ။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး မောင်အေးချမ်း တယောက် ကျုပ်ရဲ့ဝမ်းမနာသားလေးဖြစ်သွားတယ်။
တခါကဆို ကျုပ်တပည့်မတယောက်။ သူ့သားလေး KG တက်နေတယ်။ တနေ့ကျတော့ ကလေးက “မေမေ တား မေမေ မတိအောင် ပိုက်ချံယူပြီး မုန့်ဝယ်ချားလိုက်တာ” တဲ့။ ကလေးက ပြန်ပြောပြတာ။ အဲ့ဒါကို သူ့အမေက တုတ်ကိုင်ပြီး “အဲ့ဒါ ခိုးတာဘဲ။ နင်သူခိုးလား၊ လာစမ်း” ဆိုပြီး ရိုက်မလို့လုပ်တာ။ ကလေးက ကြောက်သွားတာ တုန်လို့။ တကယ်ဆို မအေက “သားလေးလိုချင်ရင် မေမေ့ကိုပြောနော်၊ ပိုက်ဆံဆိုတာ အလွယ်မသုံးရဘူး၊ နောက်တခါ မေမေ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ့ ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ် မပေးရင် မယူရဘူးနော်” စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိုလေးသာ သင်ပေးလိုက်၊ အကြာကြီးမသင်ရပါဘူး။ က လေးက လက်ခံမှာပါ။
သားလေးကျောင်းအပ်ပြီးမှ ပင်စင်ရကတည်းက မရောက်တော့တဲ့ကျောင်းကို အကြိမ်ကြိမ်သွားရတယ်။ စာသင်ချိန်မှာ အပြင်ထွက်နေလို့၊ မိန်းကလေးတွေကိုစလို့၊ ရန်ဖြစ်လို့၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ မိလို့၊ စာမေးပွဲကျလို့၊ Report card ကိုပြင်လို့။ အမျိုးအမည် မထပ်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ခဏခဏ အတိုင်ခံရတယ်ဗျာ။ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဆီမှာ ဝန်ခံကတိလက်မှတ်ထိုး ရတာက သုံးကြိမ်၊ အတန်းပိုင်ဆရာမနဲ့ မိဘတွေကိုတောင်းပန်ရတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပါဘဲဗျာ။ သူ့ကွယ်ရာမှာ ဘယ်တော့ မှ မတောင်းပန်ဘူး။ သူ့ရှေ့တင် လေးလေးစားစားတောင်းပန်ပြတယ်။ “ကလေးက စိတ်ရင်းလေးကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်တော့် လိုအပ်ချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။” လို့လည်း ထည့်ပြောဖြစ်အောင်ပြောတယ်။ အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆို မျက်နှာလေးငယ်ပြီး အားနာသလိုလေး ကြည့်နေတတ်တယ်။ လိမ္မာသွားပြီလို့ မတွက်နဲ့။ သိပ်မကြာခင် နောက်တခါ တောင်းပန်ရအောင် သူ လုပ်တာဘဲ။
အာရုံလေးပြောင်းစေချင်လို့ပါ။ အစကတော့ သားက စိတ်မဝင်စားဘူးဗျ။ ကျုပ်လည်း ဇွဲမလျှော့ဘူး။ ဖြေဖြေ မဖြေဖြေ “ဒီနေ့ သား ယဉ်ကျေးမှုကျောင်းမှာ ဘာသင်ခဲ့ရလဲ။ ဘာစာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ခဲ့လဲ” ဆိုပြီး မေးပေးတာဘဲ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သားက စိတ်ပါလက်ပါ ရှင်းပြတတ်လာတယ်။ သူတို့ကျောင်းမှာ ဗုဒ္ဓဝင်၊ အခြေခံ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ လောကနီတိ၊ ယဉ်ကျေးမှု ကျင့်ဝတ် ဘာသာတွေ သင်ရတယ်တဲ့။ ဒီနေ့ မေးခွန်းဖြေနိုင်လို့ ဘုန်းဘုန်းက သားကိုဆုချတယ်။
“သားကို ဘာနဲ့စည်းရုံးထားတာလဲ၊ ငြိမ်သွားတယ်နော်၊ နှစ်စကလို မဟုတ်တော့ဘူး”
“ဆရာကြီးတူလေးကလေ စာတွေရလာတယ်၊ ရည်ရည်မွန်မွန်လေးလည်း ဖြစ်လာတယ်နော်”
“အရင် အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ သိပ်မတွဲတော့ဘူး၊ စာလုပ်ရင်လုပ်၊ မလုပ်ရင် စာဖတ်နေတာဘဲ၊ ပြောင်းလဲသွားတယ်နော်”
အထက်တန်းမှာ ပိုပြီးကြိုးစားလာတယ်။ သူနားလည်လာပြီ။ “သားလေ အရင်တုန်းက မလုပ်နဲ့ဆိုမှ လုပ်ချင်တာ။ ခဏခဏ အရိုက်ခံရတယ်။ အငေါက်ခံရတယ်။ ဒါလည်းမမှတ်ဘူး။ ပိုပြီးရွဲ့ချင်တယ်။ အခု မဟုတ်တာ မလုပ်ချင်တော့လို့ကို မလုပ် တော့တာတဲ့” တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို ၃ ဘာသာဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်တယ်။ အခြေခံကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ်တက်မယ်တဲ့။ ရပ်ရွာကို ကျန်းမာရေးဘက်က ကျေးဇူးပြုမယ်တဲ့။ အခုရွာမှာ စာဖတ်အသင်းလေးလုပ်ထားလို့ ပြန်ဆက်ကို စာအုပ်တွေ လာငှားတာပါတဲ့။ “သား ပြန်လိုက်ပါဦးမယ် ဘဘကြီး” တဲ့။ ထိုင်ပြီးကန်တော့တယ်။
ပြန်သွားတဲ့ သားရဲ့ကျောပြင်ကို ကျေးဇူးတင်စိတ်တွေ၊ ပီတိမျက်ဝန်းတွေနဲ့ငေးကြည့်ရင်း…. နောက်ထပ် သားလို ကလေး ပေါင်း မြောက်မြားစွာကို မျှော်လင့်ရင်း…..။